mountain lion ကိုဝယ်ပြီးဒေါင်းတာ အစကနေပြန်ပြန်ရောက်သွားလို့ - MYSTERY ZILLION
mountain lion ကိုဝယ်ပြီးဒေါင်းတာ အစကနေပြန်ပြန်ရောက်သွားလို့
Mac App Store ကနေ mountain lion ကိုဝယ်ပြီးပါပြီ။ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့ချိန် ကော်နက်ရှင်အခြေအနေအရလိုင်းပြုတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဆွဲထားပြီးတဲ့ ဖိုင်ဆိုက်ထိပြန်မရပဲ အစကနေပဲပြန်ပြန်ဒေါင်းနေပါတယ်။ Pause,Resume button ပါပေမယ့်လည်းမရပါဘူး။Resume လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်.. connection လုံး၀ြပတ်တောက်သွားရင် App Store မှာ resume လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး. အဲဒီတော့.. App Store ကနေ download ဆွဲမယ်ဆို connection မပြတ်သွားအောင် wifi အစား LAN cable သုံးြပီးဆွဲြကည့်ပါ.. connection ကခဏခဏကျတတ်ရင်. connection မကျနိုင်တဲ့နေရာမှာ download လုပ်ပါ.. အဲလိုမှမဟုတ်ရင် အစကနေပြန်ပြန် download လုပ်နေရလို့ Mountain Lion သုံးြဖစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး..